डा. केसीको माग हुबहु कार्यान्वयन हुन सक्दैनः प्रचण्ड (भिडियो सहित) · Aawaj Nepal
डा. केसीको माग हुबहु कार्यान्वयन हुन सक्दैनः प्रचण्ड (भिडियो सहित)
आवाजनेपाल, २०७५ असार २९ शुक्रबार
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले डा. गोविन्द केसीको माग हुबहु कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउनु भएको छ । भरतपुर विमानस्थलमा बिहीबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले कसैले भनेकै भरमा सबै माग सम्बोधन हुन नसक्ने बताउनु भयो ।
उहाले सार्बभौम अधिकार सम्पन्न संसद भन्दा माथि कोही पनि नहुने भन्दै कुनै व्यक्तिले यो या त्यो गर भनेर निर्दे्शित गर्न नहुने तर्क गर्नु भयो । प्रतिवेदन माथि थपघट गर्ने अधिकार सरकारलाई भएको भन्दै प्रचण्डले चिकित्सा शिक्षा विधयकबारे अन्तिम फैसला संसदले गर्ने बताए डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याएर उपचार गर्न र वार्ता गर्न शिक्षा मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ । फुजेल घटनाका सम्बन्धमा पत्रकारले सोधेको जिज्ञासामा बोल्दै प्रचण्डले छविलाल पौडलले अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै समस्या समाधानका लागि सकरात्मक वातावरण बनाएको बताउनु भयो । छविलाल पौडेल समझदारी र जिम्मेवारीका साथ कारागारमा बसेको प्रचण्डको भनाइ छ ।
प्रचण्डले फुजेल घटना बारे आफूले अरु धेरै प्रतिक्रिया दिन नचाहेको बताउनु भयो । अर्को प्रसंगमा अध्यक्ष प्रचण्डले चितवनवासी भएको नाताले चितवनमा नै राजधानी हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको बताउनु भयो । चितवन सहित सिंगो राष्ट्रको विकासका लागि ध्यान केन्द्रित गरेको भन्दै प्रचण्डले राष्ट्रलाई संमृद्धिमा नलगे उपलब्धि संस्थागत गर्न नसकिने उल्लेख गनु भयो ।